Wararka - Ogosto 16, 2020/ Ji Fangrong, gudoomiyaha Zhejiang Rongfeng Electronic Technology Co., Ltd., ayaa loo magacaabay madax sharafeedkii ugu horeeyay ee Yiwu Overseas Chinese Charity Promotion Association.
16-kii Ogosto, shirkii furitaanka ee Ururka Horumarinta Samafalka ee Yiwu ee Dibadda Shiinaha ayaa lagu qabtay Aaga Soo dejinta Badeecadaha ee Macnaha Caalamiga ah ee Suuqa Wax-soo-saarka. In ka badan 130 Shiinees ah oo dibadaha ku nool oo aad u xiiseeya waxqabadyada daryeelka bulshada ee ka kala socda in ka badan 50 waddan oo ay ku jiraan Talyaaniga, Kanada, Brazil, iyo Bosnia iyo Herzegovina, Shiinaha dib ugu soo laabtay iyo qaraabada Shiinaha ee dibedda iyo sidoo kale ardayda dibadda iyo qoysaskooda ayaa ka soo qayb galay kulanka furitaanka. calaamadaynta aasaaska rasmiga ah ee hay'addii samafal jacayl ee ugu horreysay ee Shiinaha ee gudaha magaalada Jinhua.
Kulanka waxaa guddoominayay Gong Chunqiang, oo ah xubin ka tirsan Waaxda Shaqada ee United Front ee guddiga xisbiga degmada iyo guddoomiye ku xigeenka xiriirka dowladda hoose ee Shiinaha ee dibadda. Gong Jianfeng, oo ah wasiir ku xigeenka waaxda shaqada ee United Front ee xisbiga degmada ahna gudoomiyaha xidhiidhka dawlada hoose ee Shiinaha ayaa ka qayb galay kulanka oo khudbad ka jeediyay. Ji Fangrong, oo ah guddoomiye ku xigeenka xiriirka dawladda hoose ee Shiinaha, ayaa ka qayb galay kulanka.
Khudbadiisa, Gong Jianfeng wuxuu tilmaamay in kooxda Shiinaha ee dibadaha ku soo laabatay ay waligood lahaan jireen dhaqamada wanaagsan ee naxariista, sama falka, samafalka, iyo dib u bixinta Sangzi. Yiwu waa magaalo cusub oo Shiinees dibeddeed ah oo soo ururisa Shiinees cusub oo dibeda. Bulshada Shiinuhu dibeda waxa ay dabooshaa in ka badan 100 wadan iyo gobolo aduunka ah, waxaana jira in ka badan 10 kooxood oo Shiinees ah oo dibada jooga. Toban kun oo qof, iyo dadka Shiinaha ee kala duwan ee dibadda ah ayaa si firfircoon u dhiirrigeliya suuqa si ay u baxaan oo ay alaabtu u baxaan, laakiin sidoo kale waxay sii wadaan inay ka qaybqaataan hawlaha daryeelka bulshada ee kala duwan iyo samafalka sida yaraynta faqriga iyo caawinta, deeqda dugsiga, la dagaallanka masiibooyinka, iwm. , si loo tuso dadka Shiinaha ee dibedda ku nool bulshada aragtida wanaagsan ee maskaxda ee labadaba xaqnimada iyo faa'iidada iyo kor u qaadida dabeecadda wanaagsan waxay si fiican u gudbisay tamar bulsheed oo wanaagsan waxayna ballaarisay saameynta Xiriirka Shiinaha ee Dibadda.
Waxa uu sheegay in Qiaoai Charity ay leedahay laba macne: Jacaylka Qiaoai ee daryeelka bulshada iyo samafalka Shiinaha ee daryeelka bulshada ee dibadda. Aasaaska Ururka Dhiirrigelinta Daryeelka Dadweynaha ee Qiaoai wuxuu aasaasay madal cusub oo loogu talagalay Shiineeska dibedda ee caddaaladda, Shiinaha dibedda, Shiinaha dibadaha ku soo laabtay iyo qaraabadooda si ay uga qaybqaataan hawlaha daryeelka bulshada. Waa dhaqdhaqaaq cusub iyo madal cusub. Aasaaska Ururka Horumarinta Jacaylka Shiinaha ee Dibadda waa baahida loo qabo dhismaha siyaasadeed ee Shiinaha ee dibadda, isagoo muujinaya "daaqadda muhiimka ah, Shiineeska dibedda ayaa mas'uul ka ah"; waa baahida loo qabo daryeelka dadweynaha si loo dhiso Shiinaha dibadda, oo muujinaya "ujeeddada asalka ah ee Shiinaha dibadda iyo himilada Shiinaha dibadda"; waa baahida loo qabo shiinaha dibada la isugu keeno. Horumarinta saamaynta iyo sumcadda Xiriirka Shiinaha ee Dibadda. Ujeedada ugu weyn ee aasaaska Ururka Horumarinta waa in si wanaagsan loo mideeyo kanaalada deeqaha ee Shiinaha dibadda, si fiican loo midoobo oo loo ururiyo awoodda Shiinaha ee dibadda si ay u fuliyaan hawlo samafal ah, iyo in la geliyo camalka wanaagsan ee Shiinaha ee dibadda si cilmiyaysan, midaysan. iyo raad waara, oo si firfircoon u hagi. Tirada badan ee dadka ku nool bulshada Shiinaha ee ku nool dibadaha ayaa u arka ka qayb qaadashada samafalka inay tahay masuuliyad bulsho, qaab nololeed, iyo muujin jacayl, waxayna si joogto ah u riixaan samafalka magaalada heer cusub.
Waxa uu rajaynayay in shaqada mustaqbalka, Ururka Horumarinta Jacaylka ee Shiinaha ee Dibadda uu ilaalin doono hadafka "daryeelka kooxaha u baahan Shiinaha ee dibadda, taageerada samafalka iyo daryeelka dadweynaha, iyo kor u qaadida wada noolaanshaha bulshada iyo horumarka", iyo isu keeno kheyraadka dibadda Shiinaha oo siiya ciyaar buuxda faa'iidooyinkooda. Tilmaamaha waa la soo bandhigay waxaana la dhisay astaanta Shiinaha ee dibedda. Qorshaynta hawlaha daryeelka dadweynaha, fulinta mashaariicda daryeelka dadweynaha, iyo samaynta kooxaha daryeelka dadweynaha, waxaan faafin karnaa ruuxa jacaylka Shiinaha ee dibadda, tusno qaabka bulshada Shiinaha ee dibadda, kor u qaadida saamaynta bulshada Shiinaha ee dibadda, oo aan samayno wax ku ool ah. waxyaabaha loogu talagalay dadka bulshada Shiinaha ee dibedda. Xalliyaan mashaakilaadka, samee waxyaabo wanaagsan, oo ka wada shaqeeya sidii hawlaha samafal ee Shiinaha ee dibedda looga dhigi lahaa mid weyn oo xooggan si loo gaaro natiijooyin
Kulanku waxa uu dib u eegis ku sameeyay oo uu gudbiyay "Qodobada Ururka Horumarinta Samafalka ee Yiwu ee Dibadda Shiinaha", ayaa doortay guddiga ugu horreeya ee agaasimayaasha iyo guddiga ugu horreeya ee kormeerayaasha Ururka Horumarinta Samafalka Shiinaha ee Dibadda. Guddoomiyaha Shiinaha Cai Fengping oo Talyaani ah oo ku nool dibadda ayaa loo doortay, kormeerahana waxaa loo doortay Chen Qingwen oo u dhashay Kanada. Madaw Shiinees ah He Changming ayaa loo doortay gudoomiyaha fulinta, Brazilian dibeda Shiinaha Fu Qunying ayaa loo doortay gudoomiye ku xigeenka fulinta, Ganacsade u dhashay dalka Angola oo u dhashay Shiinaha Chen Dongmin, ganacsade Thai ah Chen Jinlong, ganacsade Dubai ah Wu Xinfu, waxa uu dib ugu soo laabtay arday Shiinees ah oo lagu magacaabo He Jin, dibada. Xubnaha qoyska ardayda Shiinaha Liu Qian, iyo dadka dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ee taageeray hawsha samafalka ee Xiriirka Shiinaha ee Dibadda, Xuan Feng iyo Wang Zuo ayaa loo doortay madaxweyne ku xigeen.
Xoghaye guud ayaa loo doortay ganacsade Shiinees ah oo u dhashay dalka Ruushka Wang Zhaoqing, waxaana madaxwaynihii ugu horeeyay ee sharafeed loo magacaabay wakiilada bulshada Shiinaha sida Jin Hangang, Lu Shikai, Wang Zhengyun, Wang Huibin, Zhu Zhijian, Ji Fangrong, Fu Xingcheng. ee Ururka.